ပို့စ်တင်ချိန် - 10/28/2013 08:53:00 AM
(၁) မင်္ဂလာပါဆရာ သမီးလက်သည်းခွံမှာ အဖြူ စက်လေးတွေ ပေါ်နေပါတယ် zinc ဓာတ်ချို့တဲ့တယ် လို့သိရပါတယ်။ သမီးက အနီရောင် အသားနဲ့ ကြက်ဥအနှစ် ကမာ တစ်မျိုးမှမစားပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်zinc ချို့တဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ zinc သောက်ချင်ပါတယ်။ ပိုသောက်မိရင်လည်း မကောင်းဘူးလို့ သိရပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက် mg သောက်သင့်သလဲ သိချင်ပါတယ်။ အခြား ဘယ်လို အသီးအရွက်က နေ Zinc ဓာတ် ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
(၂) ကျွန်တော်က ရန်ကုန်ကပါ။ ကျွန်တော့်ကို ဆရာဝန်တယောက်က ဇင့်ပါတဲ့အားဆေး သောက်ဖို့ ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဇင့်ဓါတ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိပါရစေ။ ဇင့်ဆေးပြားရော သီးသန့်သောက်လို့ရပါသလား။
လူတွေအတွက် အားဆေးဆိုရင် အများအားဖြင့် (ဗီတာမင်) တွေလို့ သိကြတယ်။ ဒါအပြင် ဓါတ်ဆားတွေလဲ လိုပါတယ်။ ဥပမာ သွေးအား ကောင်းဘို့ သံဓါတ်ကို အတော်များများ သိကြတယ်။ လည်ပင်းကြီးရောဂါ မဖြစ်စေတဲ့ (အိုင်အိုဒင်း) ကိုလဲ တချို့သိကြတယ်။ အလားတူ မပါမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ဓါတ်ဆားမျိုးစုံထဲမှာ (သွပ်ဓါတ်) လဲပါတယ်။
လူရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်မှာ လိုအပ်တဲ့ (အင်ဇိုင်း) ပေါင်း ၁ဝဝ လောက်မှာ သူပါတယ်။ ရောဂါပြီးစနစ်၊ (ပရိုတင်း) တည်ဆောက်မှု၊ အနာကျက်စေမှု၊ DNA မျိုးဇီဇတည်ဆောက်မှု နဲ့ (ဆဲလ်) တွေ ပွါးများမှုတွေမှာ သွပ်ဓါတ် ပါရတယ်။ အနံ့နဲ့ အရသာ အာရုံခံရာမှာလဲ သူ့အခန်းပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ကလေးငယ်ဘဝ၊ လူငယ်ဘဝတွေမှာ ပိုလိုတယ်။ အသက် ၆လအောက် ကလေး တယောက်မှာ တနေ့ကို2mg လိုပြီး၊ ၁၄ နှစ်သားရောက်ရင် 11 mg လိုတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်ချိန်တွေမှာ 13-14 mg လိုတယ်။
Zinc သွပ်ဓါတ် နည်းနေသူတွေမှာ ကြီးထွားမှု နှေးတယ်၊ အစားပျက်တယ်၊ ရောဂါပြီးစနစ်ကို ထိခိုက်တယ်။ ဆိုးသူတွေမှာ ဆံပင်ကြွတ်တယ်။ ဝမ်းလျောတယ်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျတယ်၊ ပန်းသေတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ပိန်တယ်၊ အနာကျက်တာ နှေးတယ်၊ အရသာ ပျက်တယ်၊ စိတ် ထိုင်းမှိုင်းတာတွေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
သွပ်ဓါတ်ဟာ Oysters (76.7 mg) ကမာ-မုတ် မှာ အများဆုံးပါတယ်။ Red meat အမဲ-ဆိတ်-ဝက်-သိုးသား၊ (8.9 mg)၊ ဝက်သား (4.2 mg)၊ ကြက်သား (2.7 mg)၊ ပဲတွေမှာ (1.3 mg)၊ အများဆုံးပါတယ်။ Whole grains ပြုပြင်မထားတဲ့ ဂျုံ-ဆန်-ပြောင်း အစေ့အဆံ၊ Milk products နို့နဲ့ နို့ထွက်စာ၊ Cereals အသင့်စားနိုင်တဲ့ မနက်စာ၊ Lean meats အဆီထုတ် အသား၊ Fish ငါး၊ Beans ပဲ၊ Eggs ဥ၊ Cashews သီဟိုဠ်သရက်စေ့၊ Almonds ဗာဒံစေ့၊ Nuts တခြားအစေ့အဆံတွေမှာလဲ ပါတယ်။
သံဓါတ်ဆေး များသူတွေမှာ သွပ်ဓါတ်နည်းစေတတ်တယ်။ သွပ်ဓါတ် များပြန်ရင်လဲ Copper ကြေးဓါတ် နည်းစေပြန်တယ်။
အအေးမိလို့ သောက်ရ-ငုံရတဲ့ Cold lozenges ဆေး၊ နှာခါင်းထဲ ထည့်ရတဲ့ ဆေးတွေထဲမှာ ပါနေတယ်။ Zinc-containing nasal gels or sprays ကို ကြာရှည်သုံးရင် အနံ့မရဖြစ်သွားတတ်တယ်။ သွတ်ဓါတ်လွန်ကဲသူ အဆိပ်သင့်သူတွေမှာ ပျို့-အန်ချင်တယ်၊ အစားပျက်မယ်၊ ဗိုက်နာမယ်၊ ဝမ်းပျက်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်။
Quinolone antibiotics (Cipro) and Tetracycline (Achromycin) ဆေးတွေနဲ့ တချိန်ထဲ တွဲပေးတာ မကောင်းဘူး။ အဆစ်နာအတွက်ပေးတဲ့ Penicillamine ဆေးလဲ အဲလိုဘဲ။ Chlorthalidone and Hydrochlorothiazide ဆေးတွေက သွပ်ဓါတ်ကို များများ စွန့်ထုတ်စေတယ်။
သတ်သတ်လွတ် စားသူတွေမှာ သွပ်ဓါတ်ဟာ ၅ဝ% နည်းနေတတ်တယ်။ အရက်စွဲသောက်သူတွေမှာလဲ ၃ဝ-၅ဝ% နည်းနေတယ်။
သွပ်ဓါတ်ပါ ဆေးနာမည်တွေ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
• Zinc Tablets
• Ferrous Fumarate 152+Folic acid 750mcg+Zinc sulphate
• Activecal-Forte Tablets = Calcitrol 0.25 mcg. + Calcium 500 mg. + Zinc 7.5 mg. + Magnesium 100 mg
• Haematinic with Zinc Tablets
• B complex with zinc capsules
• Multivitamin, minerals fortified with Methylcobalamin, Vitamin C and Zinc Tablets
• Boneshell Forte = Calcium 210mg + Calcitrol 0.25mcg + Calcium Citrate 1000mg + Zinc Sulpha 7.5mg
• Calcitrol 0.25 mcg + Calcium Citrate 250 + Zinc 7.5
• HG-CAL drugs = Calcium Citrate, Magnesium Hydroxide, Zinc Sulphate, Vitamin D3
• Zinc Sulfide, Zinc Sulphide
• Zinc Sulphate 20mg
• Carbonyl 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamin B 12 15 mcg + Vit. C 75 MG + Zinc Sulphate 61.8 mg
Recommended Dietary Allowances (RDAs) for Zinc သွပ်ဓါတ် တနေ့တာ လိုအပ်ချက်
အသက် 0-6 months =2mg ထက်မနည်း၊4mg ထက်မများသင့်၊
အသက်7months-3years =3mg ထက်မနည်း၊ –5mg ထက်မများသင့်၊
အသက် 4-8 years =5mg ထက်မနည်း၊ – 12 mg ထက်မများသင့်၊
အသက် 9-13 years = 8 mg ထက်မနည်း၊ – 23 mg ထက်မများသင့်၊
အသက် 14-18 years = 11 mg ထက်မနည်း၊ – 34 mg ထက်မများသင့်၊
အသက် 18 years and above = 11 mg ထက်မနည်း၊ – 40 mg ထက်မများသင့်၊
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် Pregnancy = 12 mg ထက်မနည်း၊ – 34 mg ထက်မများသင့်၊